Echiche nke akwa na-ezo n'uko ụlọ, mgbidi ma ọ bụ n'ime kaboodu | Icho mma
Akwa na zoo
Susana godoy | | Ime ụlọ ihi ụra, Ngwongwo
Nwee obere ụlọ, ọ nwere ike ịbụ nsogbu nye ọtụtụ ndị. Anyị na-arọ nrọ mgbe niile nnukwu oghere na saa mbara ịchọ mma n'otu oge dị ka nke oge a na arịa ụlọ n'akụkụ ọ bụla. Ọfọn, mgbe anyị hụrụ onwe anyị na obere ụlọ, anyị ekwesịghị ịhapụ nrọ anyị.
Naanị anyị ga-abanye na arịa ụlọ ndị mbụ ahụ, nke na-enye anyị ndụ ka mma. Na akwa na-ezochi na ngwọta kacha mma iji mepụta ime ụlọ na akụkụ nke ụlọ na-amasị gị. N'ụbọchị, ha ga-ezobe onwe ha ma pụta n’abalị, maka izu ike zuru oke.
1 Akwa ndị na-ezo n'uko ụlọ
2 Akwa ndị na-ezo na mgbidi
3 Ikea o nwere akwa na-ezo?
4 Ebee ka akwa akwa zoro ezo?
5 Modelsfọdụ ụdị akwa ndị na-ezo
Akwa ndị na-ezo n'uko ụlọ
Ọ bụrụ na ị na-echeworị echiche ahụ mana ị maghị ebe ị ga-edobe ya, kedu ihe ị chere banyere uko ụlọ? Eeh, ibu ụzọ mee ya nwere ike bụrụ echiche dịtụ iche, mana ị ga-ahụ ya n'anya ozugbo ị hụrụ ya. Na mpịachi akwa n’elu ụlọ ha ga-ekwe ka oghere nke ime ụlọ anyị ghara ịtụ ụjọ site na arịa ọ bụla ọzọ. Typedị akwa a ga-agbakwunye na elu nke ime ụlọ ọ bụla. Iji nwee ike iji ha, ha nwere sistemu wiwi nke igwe, yana ntuziaka ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ma dịkwa mma ịrụ ọrụ.
Ọzọ nke uru nke akwa na-ezo n’uko ụlọ, bụ na mgbe ị wedara ha, ha anaghị eru ala. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere tebụl nwere oche dị ka ebe iri nri ehihie, ma ọ bụ tebụl ọrụ, ị nwere ike ịhapụ ya. Ọ dị ka nhọrọ ọhụụ?
Akwa ndị na-ezo na mgbidi
Kwụ ịkpakọba Bed ...
HOMCOM ịkpakọba Isiokwu ...
SMARTBett Basic Ndina ...
Ngwongwo na-agbanwe agbanwe na-aghọwanye ejiji. Ọ bụrụ na tupu anyị ahụ otú akwa nwere ike isi gbadata n'uko ụlọ, ugbu a, anyị ga-ahapụ akụkụ ọzọ dị mkpa. Anyị na-ekwu maka akwa akwa zoro na mgbidi. Maka n'ụzọ dị otú a, anyị ga-anọgide na-asọpụrụ ohere ahụ, ebe anyị ga-enye ọtụtụ nhọrọ na otu ụdị arịa ahụ.
Mgbe anyị na-ekwu maka a mpịachi akwa na mgbidi, Nnukwu ngwongwo na-abata n'uche anyị nke anyị nwere ike wepu ebe izu ike anyị. Nke ahụ bụ otú ọ dị !. Anyị nwere ike ịhụ otu uwe akwa ma ọ bụ osisi nwere ike ịnwe ogwe osisi nwere ike iduga na akwa n'onwe ya. Ihe a na-akpọ hydraulic system ga-abụ onye na-ahụ maka inwe ike wedata ma bulie ngwaọrụ ahụ n'ọchịchọ. Taa, anyị nwekwara ike ịhụ otu esi etinye arịa ụlọ ebe a na-ehi ụra ghọọ akwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-ahụ ha kpamkpam. A ga-etinye ihe ịtụnanya na ihu ndị ọbịa gị mgbe ha hụrụ na ị gbanwee ụlọ dị ndụ n'ime ime ụlọ dị mma!
Ikea o nwere akwa na-ezo?
Mgbe anyị chere echiche zụta arịa ụlọ dị ọnụ ala, Ikea bu ulo ahia na-abata m n’obi. Ya mere, ekwesịrị ikwu na ọ bụrụ na ị na-achọ akwa na-ezobe, ị ga-ahụ ha n'ụlọ ahịa kacha nso gị. Ha nwere ihe di mfe karie, ma odikwa oke. Nwere ike ịnụ ụtọ uwe mwụda mara mma, site na nke akwa 90 come 200 ga-apụta. N'ezie, ọ bụ nhọrọ bụ isi mana n'otu oge ahụ zuru oke ka akwa ahụ a na-ekwu maka ya ghara ịnwe ụlọ dị larịị ma ọ bụ obere ụlọ.
Ikea mpịachi akwa na-azọpụta ohere
Ebee ka akwa akwa zoro ezo?
Dịka anyị na-ahụ, enwere ọtụtụ oghere ebe itinye akwa ndị zoro ezo.
Salón: Mgbe anyi nwere obere ulo, anyi aghaghi iche echiche banyere ebe a gha edobe akwa ndi zoro ezo. Otu n'ime ebe zuru oke bụ ime ụlọ. Nke mbụ, n'ihi na ọ bụ ezie akwa sofa Ha na-enye anyị nhọrọ nke izu ike, kedu ihe dị mma karịa ịhọrọ maka otu arịa ụlọ dịka arụ ọrụ mana zoro ezo mgbe niile. N'ihi ya, arịa ụlọ TV bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi. N'otu aka ahụ, nnukwu sideboards nwekwara ike zoo ihe ọzọ.
Ime ụlọ ndị ntorobịa: Ọ bụrụ na anyị na-ama chọrọ ohere na ime ụlọ, na ntorobịa ma ọ bụ ụmụaka, okpukpu abụọ. Ọ bụ ya mere o ji baa uru itinye otu ụdị arịa nke ụdị a yana na ọ na-arụ ọrụ ya abụọ.
Ọmụmụ: Maka ụbọchị ọ nwere ike ịbụ gị ebe oru ma obu imu akwukwo. N’ụzọ dị otú a, nnukwu akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ arịa ụlọ ga-agba gị gburugburu iji hazie akwụkwọ na akwụkwọ niile. Mana n'abali, ha gha aru oru ha.
Obi abụọ adịghị ya, akwa ndina zoro ezo ma ọ bụ akwa mpịachi bụ otu n’ime nhọrọ kachasị mma, ma nke bara uru na nke mbụ. N'ụzọ dị otú a, anyị agaghị ahụ ụlọ anyị jupụtara na arịa. You kpebiela otu?
Modelsfọdụ ụdị akwa ndị na-ezo
N’obere ụlọ, tinye a cama na-ebughi oke ohere dị mgbagwoju anya. Iji zere inwe nsogbu a, ụlọ ụlọ dị iche iche ejiriwo ndị na-emepụta ha chọta ihe ngwọta.
The ika Ndabere, emeela akwa zuru oke maka obere oghere, mgbe ụbọchị na mgbe anaghị eji ya, a na-ebuli ha site na usoro dị mma ma debe ha na ụlọ, na-eme ka oghere ahụ meghee n'enweghị ihe ndina ahụ na-egbochi ya. Enwere ike idowe ya n'ogo dị iche iche dabere na mkpa ya na mgbe a wedara ya, a na-ewepụ ụkwụ ụfọdụ maka nkwụsi ike ka ukwuu. O nwekwara uru ọ bara na mgbe “e debere ya” n’elu ụlọ ya, ọ na - aghọ ezigbo isi iyi bara ezigbo uru maka ntinye ihe dị iche iche dị n’okpuru akwa.
E nwekwara ụzọ ndị ọzọ dị ọnụ ala, mana obere usoro ọhụụ, dịka ọmụmaatụ Murphy Euro Kọmputa na ika ndina Ngwongwo Murphy nke oge a na-eme ka ihe ndina na-apụ n'anya ozugbo anyị biliri n'ụtụtụ na-ahapụ n'ọnọdụ ya bara uru ma dị mma oche na shelf. Ọ dịghị onye ga-enwe ike ịma n’azụ akwa dị mbara ma ọ bụrụ na ị gwaghị ha n’onwe gị. Ọ nwere ụdị dị iche iche dabere na akwa akwa na ịba uru.
Modeldị ọzọ nke ika a Ngwongwo Murphy nke oge a Ọ na - egosipụta oche oche dị mma mgbe edinaara akwa ahụ ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ ohere ahụ zuru oke n'ụbọchị. Nye chere na nke ahụ bụ ihe ndina n’abalị?
Anyị nwere ike ịga mgbe niile mpịachi akwa kpochapụwo karịa mgbe a na-etinye ha, ha dị ka uwe ejiji dị mfe. Anyị nwere ike ịchọta ha ọbụna na nhọrọ nke akwa ahịhịa ma ọ bụ otu akwa ma ọ bụ akwa abụọ.
foto: leblogdeco, flyingbeds, decoraciondelacasa, camag.es, costco.co, tocamadera.es
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Oghere » Ime ụlọ ihi ụra » Akwa na zoo
Enwere m mmasị na akwa mpịachi 1 Achọrọ m ịma ọnụahịa ahụ dijo
Ọzọkwa ụgwọ nke sofabed 2
Zaghachi M nwere mmasị na mpịachi akwa 1 Achọrọ m ịma ego
Ọ ga-amasị m ịmata ego nke akwa akwa abụọ na nke abụọ mgbe emechiri ya
Ebee ka m ga - ahụ akwa akwa okpukpu 90 ndị a dị ka kabinet ???? Kedu uru ọ bara ma dịrị na ebe 1,5
Ebee ka m nwere ike ịzụta akwa ahụ na-arịgo n'uko ụlọ ole na ole ọ na-eri? Azịza ya dị oké mkpa. Daalụ.
Zaghachi MIlagros Moreno Perez
Maria onyekwere dijo
Ihe ndina ahụ sitere na BedUp na ọnụahịa ya dịgasị iche dabere na nha, njedebe na ngwa. I nwere ike ịrịọ maka nkwuputa na http://www.bedup.fr/
Zaghachi Maria Vazquez
Ndewo, abali ọma, ọ bụrụ na ị nwere obi ọma ịgwa m ọnụ ahịa akwa akwa ndị dị ka kaboodu ma mara ma ọ bụrụ na e nwere ihe atụ ebe enwere naanị mmadụ abụọ ma ha echekwara dị ka kaboodu dị iche. ụmụ m nwanyị na ohere ahụ pere mpe, daalụ, mana ọnụ ahịa ya na mbupu Cuernavaca Morelos
Ọnụ ego akwa akwa a na-agbanwe agbanwe bụ ihe dị ka € 2800
Nkechi Onwuka dijo
Ọ ga-amasị m ịmata ọnụahịa nke otu akwa akwa abụọ gara aga, nke bụ akwa uwe akwa ọcha. Ọ ga-amasị m ịmara nha, ọ bụrụ na ọ gụnyere akwa akwa, ma ọ bụrụ na enwere agba ndị ọzọ, na ọnụahịa ahụ.
Zaghachi Marta López
Na Sellex ma ọ bụ Elmenut ị nwere ike ịchọta akwa mpịachi akwa nke ụdị a. Ihe ndina ahụ ka ọ nweghị ike ịgwa gị onye bịanyere aka na ya ebe ọ bụ onye ọrụ ibe m dere ya
Ndewo, m ga-achọ ịma ọnụahịa nke akwa akwa abụọ na-acha ọcha, biko.
Enwere m mmasị n'ihe ndina ahụ nke na-aghọ oche oche: «akwa akwa Murphy», ọ ga-amasị m ịmara ọnụahịa na ego na kaadị kredit.
Abali oma, enwere m mmasi inweta akwa zoro ezo, kedu ka m ga esi choputa ihe omuma, nha, agba, onu? Daalụ
Zaghachi maria de fatima nogueira ramos
Enwere m mmasị ịmara ọnụahịa nke akwa akwa okpukpu abụọ na sofa na shelf. Daalụ
Ọ ga-amasị m ịmara ntụzịaka na Madrid, ebe m nwere ike ịhụ ụdị arịa a. Daalụ
Zaghachi Chus VD
Ego ole bụ ebe akwa ahụ echekwara na ọ bụ tebụl. Daalụ
Ọ ga-amasị m ịma ahịa na ebe m ga-aga chọta ha
Zaghachi na Macarena Gallardo
Ndewo, Achọrọ m mmefu ego maka akwa nke na-arịgo n'uko ụlọ, m bi na Madrid.
Ọ ga-amasị m ịmata ego na ebe m nwere ike ịhụ akwa akwa zoro ezo n'uko ụlọ
Ebee ka m ga-ahụ ha, m nọ na Bogota, Colombia
Zaghachi Sandra Abella
Achọrọ m akwa mpịachi na mgbidi abụọ
dị ka arịa ụlọ
M bi na Argentina, ọ ga-amasị m ịzụta ihe ndina na-arị elu uko ụlọ. Ọ ga-adị m mkpa ma ọ dịkarịa ala usoro ma ka mma csma niile. Ana m echere nzaghachi gị na-ekele gị nke ukwuu
Jisos CECILIA GARCÍA CORREA dijo
BIKO RITE EDLỌ
Zaghachi YESMIN CECILIA GARCÍA CORREA
Biko ị nwere ike ịgafe m ma ọ bụ nye m ọnụahịa nke akwa a na-ebupụ gaa na mgbidi. Ebiri m na Saltillo Coahuila Mexico na m nwere mmasị n'ụdị akwa akwa a na-edozi na mgbidi iji chekwaa ohere. Gbasara
Zaghachi Jesús Castillo Lara
M na-achọ ihe ndina ahụ na ụlọ ndị nwere ike iwepụ ebe m si nweta ha site na ECUADOR
HECTOR MAKINTOSH dijo
Ndewo BUENAS Achọrọ m ihe ndina nke na-ezo na akwa ụlọ ebe m nwere ike ịchọta ya si na VALENCIA
Zaghachi HECTOR MACKINTOSH
Ndewo, achọrọ m ịma ego nke akwa akwa ahụ agbadara n'elu ụlọ, na nke na-apụta n'azụ sofa uhie, daalụ
Achọrọ m ihe ndina ahụ na-ezo na mgbidi wee ghọọ tebụl kọmputa
Dị ebube !!! Abụ m onye mmebe. Kedụ ka m ga - esi kpọtụrụ unu ???
Ọ ga-amasị m ịmara ebe ha dị na ọnụ ahịa akwa akwa mpịakọta abụọ n'akụkụ mgbidi ahụ
Ụlọ ọrụ RUBEN ANTONIO AGUILAR VILLA dijo
SUPER Model, FANTASTIC NA-AMASTER M SOMFỌD H AH H zoro ezo ebe ahịa dị, m nọ na VERACRUZ, MEXICO, M hụrụ ha n'anya
Zaghachi na RUBEN ANTONIO AGUILAR VILLA
Na Spain, enwere ụlọ ọrụ ọkachamara na ngwọta dị iche iche maka akwa akwa na-arịgo elu ụlọ. A na-akpọ ya Tu Lecho al Techo ma ọ dị na Madrid.
Agba ndị dakọtara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Jiri okpokolo agba chọọ ụlọ ahụ mma